Farmaajo, Abiy iyo Afwerki oo ku shiraya Asmara
Farmaajo, Abiy Ahmed iyo Afwerki
Hoggaamiyayaasha dalalka Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea ayaa shir madaxeed saddex geesood ah ku leh magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta gaaray Asmara, ayada oo ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu sidoo kale shalay safar ku tagay halkaas.
Wafdiga madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxaa ka mid ah wasiirka boostada iyo isgaarsiinta Cabdi Canshuur Xasan, iyo agaasimaha madaxtooyada Dr. Nuur Diiriye Xersi.
Farmaajo, Abiy Ahmed iyo Isais Afwerki oo marti loo yahay ayaa yeelanaya shir madaxeedkii saddexaad ee saddex geesoodka ah, oo daba socda kulamadii horey uga dhacay magaalooyinka Asmara iyo Bahri Dar, bilihii September iyo November, sida uu sheegay wasiirka warfaafinta Eritrea, Yemane Meskel.
Qoraal kasoo baxay Villa Somalia ayaa lagu sheegay in kulankan looga hadli doono “dhammeystirka hannaanka iskaashiga dalalka gobolka iyo sidii loo xaqiijin lahaa horumarka iyo xasilloonida dowladaha dan-wadaagta ah ee Geeska Afrika.”
“Inta ay kulamadani socdaan waxa ay Madaxdu qiimeynayaan miro-dhalka tallaabooyinka la qaaday si loo xaqiijiyo isu furfurnaanta dhanka diblumaasiyadda iyo isu-socodka bulshada Gobolka, mideynta qorsheyaasha lagu wiiqayo argagixisada iyo xal u helista caqabadaha ku xeeran Iskaashiga dalalka Gobolka.” Ayaa lagu yiri qoraalka.
Farmaajo ayaa laba toddobaad un ka hor kasoo laabtay Asmara, halkaasi oo uu kula soo kulmay Afwerki.